MAKETA: lempumelelo ye SA A kolutyelelo luncedwa ngalamadoda adlala imidlalo yovavanyo.
Umqeqeshi weqela iSouth Africa A uMalibongwe Maketa uyayincoma indima edlalwe ngumbutho olawula iqakamba kweli nje ngethuba abadlali abathe balifumana ukudlala kwinkunda ezahlukileyo, nangona olutyelelo lungakhange luhambe kakuhle ngokwemidlalo.
Eliqela la lapha ekhaya libethiwe inene kwimidlalo emihlanu yosuku olunye bebethwa ngo 4-1 yiIndia baphinda babethwa nakwimidlalo emibini yovavanyo kwayiyo iIndia A, bebethwa ngo 1-0.
Kuyo yonke imidlalo abayidlalileyo umahluko uyewabonakala kumdlalo wokugqibela eMysore na lapho kuye kwavela amakhulu amabini azenomkhokheli uAiden Markram naye uWiaan Mulder nawo lamadoda ajulayo uVernon Philander, Lungi Ngidi no Dane Piedt bajule kakuhle nabo.
Ngamadoda asixhenxe kweliqela le SA A azakudlala kwiqela iStandard Bank Proteas kumdlalo wokuzifudumeza phakathi kwabo ne India kumdlalo wentsuku ezintathu oqala kwiveki ezayo kwaye konke abakufundileyo bazawuzanayo kulomdlalo.
“Ndiyibona ingumsebenzi omhle xa iCricket Soutjh Africa ithatha isigqibo sokusa iqela le SA A eIndia ngoba izakuwanceda lamadoda adlala kwiqela le Proteas ngoba ukuba ufuna ukuphumemela kweli lase India funeka uzinike ithuba lokuqhelana nazo zonke izinto za lapha.” utshilo umqeqeshi.
“Ukuba uyajonga na ngoku, lamadoda azakuyomela iqela iProteas sebechithe iiveki ezimbini kweli lase India, kusekhona nomdlalo wokuzifudumeza ne Proteas . Iyabanceda abadlali into yokufika ngexesha kwamanye amazwe ngoba uye ubenethuba lokuqhelana nemozulu nazo nenkudla ezio kudlalwa kuzo”
“Bayayazi into abanoyilindela xa kusiyiwa kumdlalo wokuqala ngoba kudala belapha. Amanye amazwe xa besiza kweli nabo bafika ngexesha , ngakumbi ke thina ngoba minintsi lemidlalo sizakuyidlala kweli la lapha.”
Nangona engekho kwiqela lovavanyo, uMulder ubuye neyona mitsi kolukuphiswano lwe four-day egqiba namanani 198 kwamangeno amathathu, Markram yena wafumana imbasa ye Man of the Series ngemitsi azenayo ka 165 kwamangeno amathathu.
Wenze kakuhle kakhulu umkhokheli kwamngeno wokugqibela kumdlalo wokugqibela egqiba ku 161 kodwa naye umfo ojika ibhola uPiedt wenze umsebenzi oncomekayo xa egqiba nothinti abalithoba naye inoba utsha zintambo ngoba uneminyaka emithathu engesadlali kwiqela iProteas.
“Ngumsebenzi omhle awenzileyo uMarkram kumdlalo wokugqibela kwaye izakumnika umdla ukubheka phambili kolutyelelo naye uWiaan uzawufunda lukhulu emva kwalemidlalo.”
“Vernon noNgidi nabo bazamile kwelabo icala , eyonanto ebalulekieyo kubo ngumdla wokujula ngoba bobabini bakho kwiqela elizakudlala imidlalo emithathu yovavanyo ngoko kubalulekile bona baqhubekeke.” utshilo uMaketa.
Nangona sibabonile abanye befumana imitsi bechola othinti , abanye abafumane amathuba okudlala ngu Zubayr Hamza, Thenuis de Bruyn, Heinrich Klaasen no Senuran Muthusamy; lamadoda akhona nawo kwiqela iProteas.
Asikayazi ukuba abachongi bazakukheta bani kodwa uMaketa uyinikile incebiso yakhe.
“Imitsi kwamangeno wokuqala ibalulekile kakhulu eIndia kwaye na xa ujula funeka ukwazi ukubafaka phantsi koxinzelelo kwaye ubenawo nomonde.”
Beuran Hendricks uqinisekise impumelelo kwiqela lakhe Kohli noMiller baluvusile ukhupiswano lwe T20 De Bruyn ulibekile ikhulu lakhe lokuqala. Maharaj ujonge ukufunda kolutyelelo. Rabada utsha zintambo Markram uyalivuyela ithuba lokudlala kwezinkundla Cummins ulifakile uxinzelelo ngosuku lokuqala. Izakuba lidabi kwakhona iNewlands Rabada uyibeke bucala iAustralia AB De Villiers ulibeke kwindawo yokulawula iqela lakhe iProteas Rabada ulibeke ngentla iqela lakhe